Akụkọ - Onye na - eto eto na - agbagha agbagha iji mee ka ụmụ nwanyị nwee ike
Ommụ nwanyị Set
Onye na-eto eto na-eme mkpọtụ na-eme ka ụmụ nwanyị nwee ike
Site na: 15 nke Septemba 2020 Fiona Sinclair Scott, CNN
Unchkwalite ụdị ejiji siri ike. Unch ịmalite ụdị ejiji n'oge ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ dị nso na-agaghị ekwe omume.
N'ihi na Teniola “Tia” Adeola, ya mpụta mbụ na New York Ejiji Week show oge mere obere ihe karịrị otu ọnwa tupu akwụkwọ coronavirus jide nke isi ejiji n'isi obodo na n'ụzọ dị irè wetara zuru ụwa ọnụ ejiji ụlọ ọrụ na ikpere ya.
Ihe ngosi Adeola mere na February bụ ohere iji gosi ya ohuru e guzobere aha njirimara n'ụwa. Ya aghụghọ - okorobịa, sexy, n'oké na ruffled - jidere uche nke ejiji pịa ma chebe ya "onye na-ekiri" ọnọdụ.
(Anna Wintour na Adeola na Teen Vogue na-eme ememme Ọgbọ ọzọ na 2019 na New York City.)
Na ụbọchị mgbe ngosi ahụ gasịrị, onye na-eto eto na-atụ ilu, na-ehi ụra abalị atọ tupu ọ kwụsị.
Ma mgbe ahụ ihe niile gbanwere. Adeola laghachiri n'ụlọ ezinaụlọ ya na Lagos, Nigeria, iji pụọ na mkpọchi kachasị njọ.
“Ọ dị ilu,” ka Adeola kwuru, ugbu a ọ laghachiri na studio ya Manhattan. "M nnọọ ekele na ekele na-iche na ezinụlọ m ma na-aga site n'inwe m studio ohere na-ekere òkè a ụlọ na nwanne m nwaanyị… ọ bụ nnọọ a otutu."
Ọ nọrọ ọnwa mbụ na-eche dị ka a ga-asị na ọ kwụrụ kpamkpam ma hapụ onwe ya oge ka ọ na-enwe mwute. Mana n’ikpeazụ, Adeola lọghachiri ọrụ. N’ịtụgharị uche n’ihe mere ọ ga-eji maliteghachi, o ji nkwuwa okwu kwuo, sị: “Ana m anọchite anya ọgbọ na-aga ịgbanwe ụwa.”
(Uwe e mere nke Tia Adeola. Ebe E Si Nweta: Tia Adeola)
N'iburu ebumnuche ahụ n'uche ọ laghachi azụ, na-ele ihe osise eserese ruo ọtụtụ awa ma jikọta ya na ihe edeturu akụkọ ihe mere eme mbụ ya, nke mere ka ọtụtụ ihe mkpuchi ihu na-egosipụta mbinye aka ya.
Ihe ngbasa ozi nke Adeola bu ihe nzaghaghari banyere akwukwo akuko ihe omumu nke mbu muturu n'ulo akwukwo. Ka ọ na-agwa ya, akwụkwọ nyocha ụlọ akwụkwọ sekọndrị ya nyochachara ejiji Spanish na narị afọ nke 16 na eserese mara mma. Site na nyocha ya banyere ọrụ site n'oge ahụ, ọ chọpụtara na enweghị ndị ojii nọchiri anya ya na onyonyo ahụ, belụsọ na egosiri ha dị ka ndị ohu ma ọ bụ ndị na-achị ọchị. Ka nke a nọgidesiri ike na ya, o kwuru na ọ naghị ewepụ n'eziokwu ahụ bụ na uwe dị na foto ndị mara mma.
O kwuru, sị, "thatzọ ndị omenkà ahụ siri weghara udidi ahụ, akwa ya, na ihe ndị ahụ eji brọsh mee ha dị ịtụnanya. "Na ruffles - a na-akpọ ha 'ruff' n'oge ahụ ma jiri starch mee ha… Ka ibu ruffle gị na-abawanye, ị nọ elu n'obodo."
Adeola's ruffles na-eme ihe iji weghachite akụkụ ahụ nke akụkọ ntolite. N'ime oru ha n'ime echiche nke aka ya, o tinyela ikike nke nkwupụta ruff n'aka nwa agbọghọ na ụmụ nwanyị dị iche iche. Ndị obodo nwere ụfọdụ ndị otu mara mma: Gigi Hadid, Dua Lipa na Lizzo niile eyiri ibe ya.
Ndị ama ama, Adeola emeela ka ụmụ nwanyị gbaa ya gburugburu. Ọ sịrị, "A gaghị enwe Tia ma ọ bụrụ na ụmụ nwanyị nọ n'obodo m na-akwado m ma na-eme ka ihe kwe omume." “Ndị mmadụ na-aga na ika ika Instagram peeji ma hụ ihe ndị a dị ịtụnanya foto ha hụrụ n'anya, ma ha anaghị aghọta na e nwere nwanyị etemeete omenka, e nwere nwanyị edozi isi, e nwere nwanyị foto, e nwere ndị inyom set nnyemaaka. Ya mere, ụmụ nwanyị a nọ n'obodo m na-echeta mgbe m na-eme uwe ndị a. ”
Adeola agaghị egosi n'oge New York Ejiji Ejiji nke Septemba a, mana ọ na-arụ ọrụ na obere ihe nkiri ịhapụ n'oge mgbụsị akwụkwọ. Na ihe ịma aka nke ọrịa a ka na-aga n'ihu, ụzọ dị n'ihu abụghị nke doro anya maka onye mmebe ahụ, mana otu ihe doro anya: ọ kpebisiri ike ịga n'ihu na ọ ga-ahapụ ruffles n'okporo ụzọ ahụ.
Post oge: Mee-07-2021
Hefei Lisen Bubata na Mbupụ Co., Ltd.